को हुन् गृहमन्त्री खगराज अधिकारी ? यस्ताे छ राजनीतिक नालिबेली - News 88 Post
June 10, 2021 June 10, 2021 N88LeaveaComment on को हुन् गृहमन्त्री खगराज अधिकारी ? यस्ताे छ राजनीतिक नालिबेली
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार फेरि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने भएका छन्। अघिल्लो साता मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार नेकपा एमालेमा आफ्नो समूहका मानिसहरूलाई मन्त्रिमण्डलमा समावेश गर्न लागेका हुन्।
त्यसपछि अब को गृहमन्त्री बन्छ भन्ने आमचासो थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट भएकामध्ये गृह मन्त्रीका लागस अधिकारी उपयुक्त भएको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतको दाबी छ।
‘गृहमन्त्रीका लागि धेरैको दाबी थियो। आफ्नो मार्केटिङ आफैं गरिरहेका थुप्रै मान्छे थिए। तिनको नाम र फोटो धेरैले छापेका पनि थिए,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो,’पञ्चायतकालमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै अधिकारी पनि जेल पर्नुभएको थियो। यो तथ्य जनताले थाहा पाउनुपर्छ। अधिकारीलाई पनि निकै ठूलो दर्ज्यानी दिनुभयो। गणेश तिमल्सिनालाई पनि सम्माननीय बनाइदिनुभयो।’
केही समय शिक्षण पेशामा रहेकी थापा २०६४ पछि महिला आयोगको प्रमुख बनेकी थिइन्।
अप्रत्यासित रुपमा बढ्यो नेपालमा सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
April 2, 2021 April 2, 2021 N88
बाढी–पहिरो प्रभावितलाई अस्थायी आवासका लागि ओली सरकारले ५० हजार दिने
June 16, 2021 June 16, 2021 N88